Indalo emangalisayo uCortijo Buena Vista - I-Airbnb
Indalo emangalisayo uCortijo Buena Vista
ICortijo Buena Vista yindawo entle yokubaleka enemibono ebalaseleyo eRio de la Miel, le ntlambo intle ibekwe kumbindi weMaro-Cerro Gordo'Nature Reserve.
Le ndlu yamagumbi amabini ithokomeleyo ixhotyiswe ngokukhululekileyo nge-air conditioning, i-WiFi yesantya esiphezulu kunye nokunye. Ngaphandle, iindawo ezininzi, iphuli yegadi yabucala encinci kunye nebhedi entle eneepowusta ezine ziya kwenza ukuhlala kwakho apha kube ngamava awodwa, ukonwabela imekobume yendalo kunye neembono eziphefumlayo kwindawo ekungqongileyo.
UCortijo Buena Vista yindlu encinci yelizwe yokufama eye yahlaziywa ngokupheleleyo. Indlu, iitesi kunye negadi zibucala ngokupheleleyo kwaye zigcinelwe undwendwe.
Ipropathi inika indawo emangalisayo ukonwabela indalo kunye nemibono eyoyikekayo. Iqula elincinane elihluziweyo (300 x 200 x 150cm) liyafumaneka ukusuka kuEpreli ukuya kuOktobha.
Ilayisensi yabakhenkethi: CR/MA/00868
IRio de la Miel yiPaki yeNdalo; ukusuka kwithambeka elilawulayo lendlu ubani usenokukwazi ukubona ezinye zezilwanyana zasendle ezininzi ezihlala ngokukhululekileyo eNtilini: iibhokhwe zasendle, iimpungutye, iihagu neentaka ezininzi ezahlukeneyo. Ngaphandle kwangeeCawa xa ezinye izindlu eziselumelwaneni zinokutyelelwa, kuzola kuphelele, kuphazanyiswa nje kancinane ngumlambo osebezayo osentlanjeni.
Iintaba ezijikelezileyo zibonelela ngamathuba angenamkhawulo wokuhamba / ukuhamba, ukusuka kwi-1 iyure yokuhamba ukuya kwi-excursion yosuku lonke. Kwi-5km, ulwandle i-'playa del Molino de Papel' - inxalenye yePaki yeNdalo - yaziwa ngamanzi ayo acocekileyo kakhulu kwaye ixatyiswa ngabalobi basekuhlaleni ngenxa yobutyebi bayo bamanzi.
Imoto iyafuneka kule ndlu.
Intsapho yabanini bahlala eNerja, kwi-10 km. Ziyafumaneka kuyo nayiphi na imfuno.
Inombolo yomthetho: CR/MA/00868
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Almuñécar, Granada